Xildhibaan Mataan Oo Isku Day Dil Ka Badbaaday. – Calamada.com
Xildhibaan Mataan Oo Isku Day Dil Ka Badbaaday.
Saacadihii lasoo dhaafay waxaa weeraro loo adeegsaday bambaanada nooca gacanta laga tuura lagu weeraray hooyga degmada Beledxaawo ee gobalka Gedo uu ka deganyahay mid ka mid ah xildhibaanada dowlada Ridada federaalka.
Xildhibaanka hooygiisa la weeraray ayaa lagu magacaabaa Xildhibaan Cabdi Fitaax Nuur Mataan’waxaana la xaqiijiyay in dhaaguut Mataan xilliga weerarada qaraxyada uu hooygiisa ku sugnaay.
Dhawaaqa qaraxyada bambaana ee lagu weeraray hooyga Xildhibaanka ayaa la xaqiijiyay in si aad ah looga maqlay xaafadaha degmada Beledxaawo ee gobalka Gedo iyo qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada Mandheera oo qeyb ka ah dhulka Kenya xooga kaga heysata Somali.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka dowlada Ridada federaalka uu si dirqi ah kaga badbaaday weerarada lagu khaarijin rabay balse waxaa weerarka ku dhaawacmay tiro ka tirsan ilaaladiisa iyo dadkii xilliga qaraxyada hooyga kula sugnaay.
Isku dayga dilka ee uu ka badbaaday xildhibaan Cabdi Fitaax Nuur Mataan ayaa kusoo aadaya xilli labo maalin ka hor uu weerar isku day dil ah uu ka badbaaday gudoomiyaha dowlada Ridada ugu magacaaban degmada Beledxaawo kaasi oo isagoo gaarigiisa la socda lagu qarxiyay bartamaha degmadaasi.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 08-07-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 08-07-1437 Hijri.